madaxweyne biden oo saxiixay in ciidamada mareykanka dib loogu celinayo soomaaliya | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA madaxweyne biden oo saxiixay in ciidamada mareykanka dib loogu celinayo soomaaliya
Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa saxiixay amar u ogolaanaya millatariga inay mar kale boqollaal ka mid ah ciidamada hawl-gallada gaarka ah geeyaan gudaha Soomaaliya.
Talaabadan ayaa meesha ka saaraysa go’aankii Madaxweynihii hore Donald J. Trump uu ku dhawaad ​​700 oo askari oo dhulka ah kaga soo saaray Somalia
Mr. Biden ayaa ogolaaday codsi ka yimid Pentagon-ka oo ku saabsan in la beegsado ku dhawaad ​​12 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al Qaacida.
Tan iyo markii Mr. Biden la wareegay xafiiska, duqeymaha cirka ee ciidamada Mareykanka ayaa inta badan ku koobnaa kuwa loogu talagalay in lagu difaaco ciidamada Dowlada Somalia ee wajahaya khatar degdeg ah.
Go’aamada uu soo saaray Mr. Biden ayaa dib u soo noolayn doona hawlgal furan oo ciiadmada Maraykan kula dagaalamayaan argagixisanimada.
Talaabadan ayaa ka duwan go’aankii uu sanadkii hore ciidamada Mareykanka uga saaray Afghanistaan
Mr. Biden ayaa saxiixay soo jeedinta Xoghayaha Difaaca Lloyd J. Austin III horaantii May, sida ay saraakiishu sheegeen. Bayaan ay soo saartay, Adrienne Watson, afhayeenka Golaha Amniga Qaranka, ayaa ku qiratay tallaabadaas, iyadoo sheegtay in ay suuragelin doonto “dagaal wax ku ool ah oo ka dhan ah Al Shabaab.”
“Go’aanka dib-u-soo-celinta joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Somalia waxaa loo gaarey si loo kordhiyo badbaadada iyo waxtarka ciidamadeena oo aan awood u siinno inay bixiyaan taageero wax ku ool ah ” ayay tiri.
Ms. Watson ma aysan tilmaamin tirada ciidamada uu militarigu u diri doono Somalia. Laakin saraakiil magacooda ka gaabsaday ayaa wargeyska New York Times u sheegay in qiyaastii 450 illaa 700 oo askari loo dirayo Somalia Taasoo beddeli doonta nidaamkii ay ciidamada Maraykanka ee tababaridda iyo la-talinta ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ay muddo kooban joogeen tan iyo markii Mr. Trump uu soo saaray wax ay Ms. Watson ku tilmaantay. “Go’aan degdeg ah oo ka noqoshada.”
Previous articleMadaxweyne la doortay Xasan sheekh & RW Rooble oo Caawa kulan yeeshay
Next articleBiden approves plan to redeploy several hundred ground forces into Somalia
Wasiir ka Tirsan Wasiiradda Maamulka Somaliland oo Laga helay Cudurka Coronaviruska